Black Magic: Samsung တွေမှာ Root မလုပ်ဘဲ Myanmar Font ထည့်နည်း
Samsung တွေမှာ Root မလုပ်ဘဲ Myanmar Font ထည့်နည်း
Posted by Black Magic | Posted in Ways For Android , နည်းလမ်းများ | Posted on 11:25 PM
Samsaung Galaxy Mini S3 မှာ မြန်မာစာ မထည့်တတ်လို့ပါဆိုပြီး မေးနေလို့ နားလည်လွယ်အောင် အနည်းငယ်ပြင်ဆင်ပြီး တဆင့်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။
Samsaung Galaxy S3 Mini GT-i8190,GT-i8190n...ect များမှာ Root မလုပ်ပဲ Setting , Display က Font Style ပါတဲ့ Samsaung Series တွေမှာ လွယ်ကူစွာ မြန်စာဖေါင့် ထည့်သွင်းနည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ Android, Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich....ect Android Version တွေမှာ မြန်မာမစလုံးများကို Root မလုပ်ပဲနှင့် Setting , Display က Font Style ပါတဲ့ Samsaung Series တွေမှာ ထည့်သွင့်တာ ကောင်းမွန်စွာ တွေ့မြင်ရမှာပါ..။
ဒါတွေကိုလည်း မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ မိမိ၏ Android Smart ဖုန်းကို Root လုပ်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်..။ Root လုပ်ပြီးရင်တော့ မြန်မာစာလုံးများကို ကောင်းမွန်စွာ မြင်လို့ရတော့မှာပါ။ အခုကျနော် ပြပေးမှာကတော့ Android Smart ဖုန်းကို Root မလုပ်ချင်သူများအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးကို ပြပေးပါမယ်။
အရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ File တွေကို Download ရယူပါ။
၁။ Download ZawGyi One TTF.apk
၂။ Download Frozen Keyboard Pro
နှစ်ခုစလုံး ဒေါင်းယူပြီး ဖုန်းမှာ Install လုပ်ပါ ... Install လုပ်ရင်း
Install Block ဆိုတာမျိုးပေါ်လာရင် Settings -> Security မှ Unknown Sources ကို Check (အမှန်ခြစ်) လုပ်ပေးပါ..။
အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ ဆိုရင်တော့ အောက်ကအတိုင်းဆက်လုပ်ပါ။
Step 1 ... Setting ကိုရှာပါ တွေ့ပြီးဆိုရင် Setting ထဲကိုဝင်ပါ။ ပြီးရင် Display ကိုသွားပါ။ အောက်ပုံကို ဆက်ကြည့်ပါ။
Font Style ထဲဝင် ကာ Zawgyi One TTF ကို ရွေးပေးပါ။ ပေါ်လာထဲ့ Box ထဲက Yes Button လေးကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ အောက်ပုံကို ထပ်ကြည့်ပါ။
Step2... Language and Input ထဲဝင်ပြီး Frozen Zawgyi Keyboard ကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ အောက်ပုံကို ဆက်ကြည့်ပါ။
Frozen Zawgyi Keyboard ကို အမှန်ခြစ်ပေးတဲ့အခါမှာ ပြင်ပမှ Keyboard ကိုသုံးပါက Password များ၊ Credit Card Number များအတွက်စိတ်မချရကြောင်းအသိပေးလိုက်တာပါ။ သိရှိပါကြောင်းပြောရန် OK Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Keyboards and Input Meethods နေရာမှာ Frozen Zawgyi Keyboard Pro ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ။
Share From WinKabarKyaw